Press TV, oo Dood ku Saabsan Gabalka Ogaden u Qabtay Warfidiyeeno – Rasaasa News
Press TV, oo Dood ku Saabsan Gabalka Ogaden u Qabtay Warfidiyeeno
Jun 18, 2011 Press TV oo Dood ku Saabsan Gabalka Ogaden u Qabtay Warfidiyeeno
Dooda warfidiyeenada loo qabtay ayaa ku saabsanayd taariikda iyo xaalada hada ka jirta gabalka Ogaden iyo waliba heshiiskii nabada ee Jabhadaha qaarkood ay la galeen dawlada Ethiopia.
Dooda waxaa la filayey in ay ka qayb galaan afar ruux oo kala ah; saddex wariye oo madaxbanaan iyo ruux malatalaya dawlada Ethiopia.
Dooda saddexda wariye ayaa sidan ahayd;
Thomas C. mountain, waa wariye Maraykan ah oo jooga Eritrea, difaacana dawlada siyaasada xukuumada Eritrea, goorwalbana qora qoraalo ka turjumaya siyaasada xukuumada Eritrea. Thomas, waxaa uu weeraray dawlada Maraykanka isaga oo ku eedeeyey in ay kaalmayso Ethiopia, iyada oo ka fushanaysa danaheeda.
Wariyaha labaad, waa Negussie Gamma, oo ah wariye u dhashay qoomiyada Oromada, mucaaradna ku ah dawlada Ethiopia. Wariye Gamma, doodiisu ma miisaana, mar wuxuu inkirayaa taariikhda isaga oo ka fogaynaya gabalka Ogaden in taariikh ahaan uu Somali yahay. Marna waxaa uu dhiiri galinayaa ururada nabada diiday isaga oo dhaleecaynaya ururada nabada qaatay.
Mar kale Gamma, waxaa uu si dadban u sheegayaa in ururka nabada diiday uu dhawaan shaqaalaha hayyada WPF, ee ka shaqaynaya gabalka Ogaden ay qaarna dileen qaarna af duubeen.
Richard Tchoulezo, waa wariye madaxbanaan oo u dhashay dalka Camaron. Richard wuxuu doodiisa ku salaynayaa, in dhibaatooyinka Afrika ay yihiin dhibaato xuduudeed, kuwaas oo gumaystayaashii reer Yurub ay abuureen xiligii ay ka tagayeen Afrika.
Richard, waxaa uu khalad wayn saaray ururada nabada diiday ee ka dagaalama gabalka Ogaden, wuxuuna yidhi “waxay lumiyeen fursad nabadeed oo ay saaxiibadood qaateen.”
Sida uu sheegay wariyaha Press TV, waxaa dooda [panel] diiday in ay ka qayb gasho dawlada Ethiopia, sababtana ma ayna sheegin.
Dooda oo maqal iyo muuqaal ah lana qaaday June 14-keedii waatan ee daawada.
Ururka Dhallinyarada Somalida Ethiopia ee SanDiego, oo Cambaareeyey Kooxda Jwxo-shiil
Xubno ah Kooxda Jwxo-shiil, oo Laga Yaabo in Loo Qabto Arimo la Xidhiidha Argagixisanimo